မယ်သံ: သက်တမ်းများကို ဆန်းစစ်ခြင်း - အိမ်ရှင်မ သက်တမ်း ၁၀ နှစ် တိတိ
သက်တမ်းများကို ဆန်းစစ်ခြင်း - အိမ်ရှင်မ သက်တမ်း ၁၀ နှစ် တိတိ
ကျမ အသက်က ၄၀ တန်းရောက်လာပြီ ဆိုတော့ သက်တမ်းကို ကြည့်ရင် သုံးပုံ နှစ်ပုံ လောက်က ကုန်ခဲ့ပြီ လို့ဆိုရမှာပါ ။ ဒီသက်တမ်းမှာ ကျမရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှူတွေ ခန္ဓာကိုယ်အင်အားကို အသုံးချခဲ့တာတွေက သိပ်များတော့ ကျန်တဲ့ တစ်ပုံ ဟာအပြည့်နေရလိမ့်မယ်တော့ မျှော်လင့်မထားပါဘူး ။ တစ်ခုပဲ ..ကျမ သမီးလေးက အခုမှ အသက် လေးနှစ်တောင်မပြည့်တတ်သေးဘူးဆိုတော့ အဲဒီအချိန် နောက်အနှစ် ၂၀ မှာ သူဟာ ၂၄ နှစ်ပဲရှိနေဦးမှာ ။ ထားပါတော့လေ...
အသက် ၄၀ တန်းကို ခွဲခြမ်းလိုက်ရင်
မိဘ အရိပ်အာဝါသအောက်မှာနေခဲ့တဲ့ သံယောဇဉ်သက်တမ်းက အနှစ် ၂၀ ။
အဲဒီအနှစ် ၂၀ ကာလမှာ ကျမရဲ့ ကံကျေးဇူးကြောင့် အေးချမ်းသာယာပြီး ပြည့်စုံတဲ့ အရိပ်အောက်မှာနေခဲ့ရတာပါ ။
ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မိဘကပေးလိုက်တဲ့ ကျန်းမာတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ပညာလေးကို အမှီပြု နေခဲ့ရတာ ၁၀ နှစ် နဲ့ ...
နောက်တော့ ၉.၁၂.၂၀၀၄ ကနေ ဒီနေ့အထိ အိမ်ရှင်မသက်တမ်း ၁၀ နှစ်တိတိ ။
ဒီ ၁၀ နှစ်မှာ ကျမကို ဒီရာထူး ( ရာထူးဆိုတာ ရူးတာပါတဲ့ :P) ကို ခန့်အပ်ပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာအပြည့်အ၀ ပေးခဲ့တဲ့ အိမ်ဦးနတ်ကို ဒီနေရာကနေ Appreciate လုပ်လိုက်ပါတယ် ။
သူဟာ ကျမအတွက် ၊ ကျမရဲ့ အိမ်ရှင်မ ဘ၀ဖြစ်တည်စေမှူအတွက်တစ်ဦးတည်းသော မြတ်နိုးရာ၊ ကိုးကွယ်ရာ ဟီးရိုးတစ်ယောက်ပါ ။
ဒါဟာ စကားအဖြစ် ပေါ့ပေါ့တန်တန်ပြောလိုက်တာမျိုး မဟုတ်ပါ ။ ဒီ ၁၀ နှစ်အတွင်းမှာ အမျိုးမျိုးကြုံလာခဲ့ရပြီ ။ အခက်အခဲတွေ ပြသနာတွေ ကြုံလာရတိုင်းမှာ သူဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးတာ ၊ ပျော်ရွှင်စရာကြုံတွေ့လာရချိန်မှာ သူ ဘယ်လို မျှဝေပေးခဲ့တာ ဆိုတဲ့ အရာများစွာအတွက်၊ ကျမ ရဲ့ ဘ၀ရယ် အချိန်ရယ် ဒီ ၁၀ နှစ်တာ ကာလမှာ ကိုယ်တိုင် တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသမျှ တွေကြောင့် ယုံကြည်စွာနဲ့ ပြောရတာပါ ။
ကျမ တို့ Physics သဘောတရားမှာတော့ အရွေ့ ဆိုတာမရှိခဲ့ရင် ဘယ်လောက်ပဲ လုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ work done ကတော့ zero ပါပဲ တဲ့ ။ ဒီ ၁၀ နှစ်မှာ ကျမ တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ work done ဟာ zero ရော minus ပါ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး ။ ဒါက သေချာပါတယ် ။
ကျမ ကတော့ ဒီအိမ်ရှင်မ ရာထူးကို ရခဲ့ချိန်မှာ ကျမရဲ့ဘ၀မှာ အရင်က မိဘရယ် မောင်လေးရယ် ရှိခဲ့တယ် ။ သူက ကိုယ့်အိမ်တွင်း ကို ၀င်လာခဲ့တဲ့ နောက်ထပ်အိမ်သားတစ်ယောက်ပဲ လို့ အဲလိုပဲသဘောထားခဲ့တယ် ။ အရင်ရှိပြီးသားမိသားစုထဲက ခွဲထွက်လာ နောက်ထပ်မိသားစု တစ်ခုသတ်သတ်လို့ ခွဲထွက်ခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူး ။
ချစ်ကြသူချင်း ဘ၀တစ်ခုကို အတူတူ ထူထောင်လိုက်တာအကြောင်းမဟုတ်ပေမယ့် ချစ်သူရဲ့ မျက်နှာတစ်ခုထဲနဲ့ လေးလေးစားစားနေရာတခုပေး၇မယ့် မိဘနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့အခါ အမှားအယွင်း ဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်ရတဲ့ စိတ်ဖိအားကို သူ မဖြစ်မနေရင်ဆိုင်ရတော့မယ် ။
ဒီနေရာမှာ ကျမ ရဲ့နေရာက အဓိက ကျပါတယ် ။
နှစ်ဘက်လုံးဟာ ကျမကို ချစ်တဲ့သူချည်းပဲ ။
ချစ်ကြလို့ ဖြစ်လာတဲ့ စေတနာကို အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ မတူညီကြတော့ စိတ်အခန့် မသင့်စ ရာလေးတွေ တွေ့ရမှာပါပဲ ။
နှစ်ဘက်လုံး သံသယမရှိ တသားထဲ ဖြစ်သွားစေဖို့က တော့ ကျမအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ် ။ ဒီအချိန်မှာတော့ ကျမ အဲဒါကို လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ပဲ ပြောပါရစေတော့။
ကျမတို့ အိမ်ထောင်ဦးကာလ တစ်ရက်မှာ အမျိုးသားက သူ့အလုပ်မှာ စိတ်ဖိစီးတာတွေများနေချိန် ကျမကို အော်လိုက်ပါတယ် ။
အမေ ဟာ တခါထဲ အခန်းထဲကနေ ပြေးထွက်လာပါတယ် ။
နောက် ကျမကို သူ့ရှေ့မှာမေးပါတယ် " သမီး ညီးမှာဘာတွေအားနည်းချက်ရှိနေလို့ သူက အော်ရတာလဲ" တဲ့ ။
အဲဒီအချိန်သူ့မျက်နှာကို ကြည့်လိုက်တော့ သူလဲ အမေ အဲလိုထွက်လာပြီး ဒေါသနဲ့ မေးတာကို စိတ်ကသိကအောက် ဖြစ်နေပုံ နဲ့ ။
ကျမ အမေ့ကို သူ သမီးကို အော်တာမဟုတ်ပါဘူး။ သူအော်အောင် သမီးမှ ဘာမှ လုပ်မထားတာ သူ့ဟာသူစိတ်ညစ်လို့အော်တာပါအမေရယ် ။ သနားပါတယ် ကာရာအိုကေဆိုင်တောင် သွားမအော်နိုင်ရှာဘူး ။ ကိုဦး ရှင် ပိုက်ဆံများများရှာ သိလား ဒါမှ ကာရာအိုကေဆိုင်ကိုသွားအော်နိုင်မှာ အခုတော့ ရေသွားသောက်လိုက်ဦး အမေ့ကိုပါ ရေတစ်ခွက်ခပ်ပေးလိုက် လို့ ခပ်သောသောလေးပြောလိုက်ပါတယ် ။
သူကလဲ အဲတော့မှ စိတ်သက်သာရာ ရ သွားတဲ့ပုံနဲ့ ရေသွားခပ် အမေ့ကိုပေးပြီး ဒေါ်လေး ကျနော်တောင်းပန်ပါတယ်။ စိတ်ရှုပ်လွန်းလို့ စိတ်လွတ်သွားတယ်လို့ ပြောလိုက်ရော ။
အမေ လဲ သူ အဲလို ဒေါသနဲ့ ထွက်လာမေးမိတာကို စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားသလား ။ သူ့သားမက် အဲလောက်စိတ်ရှုပ်တာကိုပဲ သနားသွားသလား ဒါမှမဟုတ် သူ့သားမက် ငွေပိုရှာနိုင်လာချိန်မှာ သူကသမီးကို အိမ်မှာထားခဲ့ပြီး ကာရာအိုကေဆိုင် သွားအော်မှာစိုး၇ိမ်သလား မသိပါဘူး ။ နောက်ဆို ကျမတို့ လင်မယား အော်ဟစ်နေလဲ တော်ရုံဆို ၀င်မပါတော့ပါဘူး ။
အိမ်ထောင်ဦး အဆင်မပြေချိန်မှာတော့ နှစ်ယောက်သား ဂျိမ်နောင်ချတာ အဆက်မပြတ်ပါပဲ ။ တော်သေးတာက နှစ်ယောက်သားက စိတ်မကောက်တတ်တာပဲ ။ ဂျိမ်နောင်ချပြီးရင် မောမောနဲ့ ဗိုက်ဆာရင် အိမ်မှာ ဘာရှိလဲ ရှိတာအတူစားကြ မရှိလဲ အပြင်ထွက်စားကြနဲ့ ..ကြားထဲ ၀င်ဖြန်ဖြေ တဲ့သူတွေ အရူးဖြစ်ကိန်းပါ ။ ဒါကြောင့်လဲ ကြားသုံးကြား ၀င်မပါနဲ့ လို့ ဆိုကြတာနေမှာပါ ။
ဆယ်နှစ်ကာလကို ကျော်လာတဲ့အခါမှာတော့ အားလုံးက အသားကျနေပြီလို့ ဆိုရပါမယ် ။ အခက်အခဲတွေ တွေ့လာတိုင်း ယုံကြည်မှုနဲ့ ကျော်ဖြတ်ကြတယ် ။ သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် မျှတ တယ်။ ရလာတဲ့ အသီးအပွင့်တွေကို ( အသီးအပွင့် တိုင်းကတော့ ချိုမြိန်နေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး ) အတူမျှဝေစားသုံးကြတယ် ။
ဆယ်နှစ်က ဟိုဘက်လွန်လာတဲ့အခါမှာ ဘာတွေဆက်ဖြစ်ဦးမယ် မပြောတတ်ပါဘူး ။ လောကကြီးမှာ ဘာမှကြိုတင်ခန့်မှန်းမထားတာတွေလဲဖြစ်တတ်လို့ ဘာကိုမှ ကံသေ ကံမ တွက်မထားပါဘူး ။ အခုချိန်မှာ ကျမကိုယ်တိုင်က စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါပေမယ့် ခန္ဓာ အလိုကို စိတ်မလိုက်နိုင်တဲ့ အချိန်ကို ကြုံရဦးမှာပါ ။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီ ဆယ်နှစ်ဆိုတဲ့ မှတ်တိုင်ကို ကောင်းကောင်းစိုက်ထူနိုင်ခဲ့တယ် လို့တော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် President of the Home အဖြစ် မာန်တက်ပါရစေလားရှင် ။
Posted by Thandar Lwin at Tuesday, December 09, 2014
Thandar Lwin December 19, 2014 at 1:46 PM
KoBoyz KoBoyz Happy anniversary ပါညော်
စု စုအေး တန်ဖိုးထား အလေးဂရုပြု
အဲန်းနီးဝေး ပျော်စရာ နှစ်ပတ်လည်ဖြစ်ပါစေ
Mushroom Mee Happy anniversary
December9at 2:58am · Like
Tin Min Htet ပျော်ပါစေ အများကြီး ..
ပျော်ပါစေ အမြဲတမ်း ..
December9at 5:12am · Like
Annie Nyein ပျော်ရွှင်စရာ မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည်နေ့လေးများစွာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော်
December9at 6:22am · Like · 1
Ko Ko Myo ဆယ် စုနှစ်မှ ရာစုနှစ်တိုင်စေသော်---
December9at 6:24am · Like · 1
Thandar Lwin December 19, 2014 at 1:48 PM
Shwe Zin ပျော်ရွှင်ပါစေ
December9at 7:15am · Like
Naw Marian Htoo happy anniversary ပါ အမ..
December9at 7:31am · Like
Nyuntnyunt Yee ချစ်စရာကောင်းအောင်တော်တော်ပြောတတ်တယ်
December9at 7:41am · Like
Phyu Ko အားကျပါတယ်အမ။ဒီ
December9at 7:46am · Like
Chit Kyi Aye ဆယ်နှစ်မှသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ....
December9at 8:02am · Like
Bo Bo Happy Anniversary to ဟေသံဦး
December9at 8:02am · Like · 1
Pe Ti Happy Anniversary ...
I think you copy from lyric ofasong
December9at 8:13am · Like
Thein Yin Mon Khaing အစ်ကိုနဲ့အစ်မတို့ပြည့်စုံတဲ့မိသားစုဘဝထာဝရပိုင်ဆိုင်န်ုင်ပါစေ.....
December9at 8:14am · Like
Hnin Wut Yi Happy anniversary to this lovely couple. 💕🎊
December9at 8:16am · Like
Mya Than Happy 10th Anniversary!
December9at 8:27am · Like
Thandar Lwin December 19, 2014 at 1:50 PM
Immature Thought From one decade to so many to come.
December9at 8:36am · Like
May Zin Aye Wow 10နှစ်တောင် ရှိပြီလား၊ ကြည့်ရတာ ချစ်စ ခင်စလေး မှတ်လို့
December9at 8:43am · Like · 3
Naw Phaw Happy Anniversary❀﻿ ❀﻿ ❀
Naw Phaw's photo.
December9at 8:55am · Like
Seesein Shin ဟေမာတို့ မိသားစုလေး ပျေည်ရွှင်ပါစေ
December9at 8:58am · Like
Thet Wai Happy anniversary...!! Celebrate your day..!!
December9at 9:14am · Like
Tin Tin Wai Happy Anniversary
December9at 9:25am · Like
Tint Tint Thein ချစ်ခင်ကြင်နာမှု ယုံကြည်လေးစားမှု နားလည်ခွင့်လွှတ်မှုတွေ ထာဝရတည်တံ့ပါစေ သန္တာရေ။
Tint Tint Thein's photo.
December9at 9:29am · Like
Zin Mar Happy anniversary bro and sis
December9at 9:41am · Like
Thandar Lwin December 19, 2014 at 1:51 PM
Khin Mg Oo အစစအရာရာ ကူညီ ချစ်ခင် ယုယ တက် သော lovely wife
Khin Mg Oo's photo.
December9at 9:43am · Like · 11
Aung Moe Htun LIKE ၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀
December9at 9:43am · Like
Kyaw Soe Minn Happy anniversary ကျွန်ုပ်တို့ထက် ငါးနှစ်တိတိ စီနီယာကျပါပေတယ်
December9at 9:51am · Like · 3
Naychi Maung Happy Anniversary Ma Than
December9at 9:52am · Like
Soe Yu Nwe ချစ်စရာ မိသားစုလေး ....happy anniversary... ama & ko kmo....!!
December9at 10:03am · Like
Win Htun Happy Anniversary!
Thandar Lwin December 19, 2014 at 1:55 PM
Win Khaing စာေ၇းဆ၇ာမလုပ်ပါ့လား
December9at 10:15am · Like · 1
Khin Mg Oo Thanks to all
December9at 10:19am · Like
Thant Swe Happy Anniversary!
December9at 10:22am · Like
Kyi Kyi Khin Happy Anniversary!
December9at 10:28am · Like
Kyi Kyi Khin သန့်ဆီက ကော်ပီလိုက်တာ
December9at 10:28am · Like · 1
Szl Linn အားကျတယ်ကွာ မိသားစု ဒီထက်ပိုပြီးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ...
December9at 10:32am · Like
Ko Thar Ngel ဖါရဲလ်ရဲ့ ဟက်ပီးးးး သီချင်း လာဆိုပေးပါတယ် ....
December9at 10:44am · Like
Zar Chi's photo.
December9at 11:11am · Like
Doreen Tin ယ နေ့ မှ စ နှစ် တစ် ရာ တိုင် ပါ စေ မောင် လေး ညီ မ လေး နဲ့ ဟေ မာ လေး
December9at 11:59am · Like · 1
Lwin Htoo Kyaw Congratulations
December9at 12:08pm · Like · 1
Ma Tda's photo.
December9at 12:31pm · Like
Nilar Soe ဆယ်နှစ်မှ သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ သာယာချမ်းမြေ့ ပါစေ။
December9at 1:57pm · Like · 1
Khaing Thazin Happy Anniversary ... မမဘဲဥနဲ့ ကိုဒန့်သလွန်
ဆံဖြူသွားကျိုးတဲ့အချိန်ထိ မခွဲအတူ ကြင်နာနိုင်ပါစေ
December9at 2:26pm · Like · 1
Khin Moe Moe ဆယ်နှစ်မှသည်နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်သာယာချမ်းမြေ့သောမိသားစုလေးဖြစ်ပါစေ Congratulations
December9at 3:57pm · Like · 1
Khaing Thazin မသံရေ ... လက်ဆောင်က ဒိုင်းမွန်းတဲ့ ... ကိုဦးကိုပူဆာတော့
A wedding anniversary is the anniversary of the dateawedding took place. Traditional names exist for some of them: for instance, 50 years of marriage is calleda"golden wedding anniversary" or simplya"golden anniversary" or "golden wedding".
December9at 4:15pm · Unlike · 1 · Remove Preview
Arth Su · Friends with Khin Mg Oo and6others
Happy Anniversary , Khin Mg Oo and beloved wife...
December9at 4:35pm · Like · 1
Khin Mg Oo Thanks
December9at 4:36pm · Like
Kayin Ma Happy Anniversary...
Kayin Ma's photo.
သက်တမ်းများကို ဆန်းစစ်ခြင်း - အိမ်ရှင်မ သက်တမ်း ၁...